ओली सरकारलाई ठुलो झड्का, राष्ट्रपती विद्येकको विपक्षमा ? — Motivatenews.Com
ओली सरकारलाई ठुलो झड्का, राष्ट्रपती विद्येकको विपक्षमा ?
काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाइ सरकारलाई ठुलो झट्का लागेको छ । एउटै पार्टीका प्रतिनिधि भएपनि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी विच मतभिन्नता हुँदा सरकारलाई झट्का लागेको हो ।
संघिय संसदबाट पास भएर राष्ट्रपती भण्डारी कहाँ प्रमाणिकरणका लागि पुगेको राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेपछि सरकारलाई झट्का लागेको हो ।
संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाले मात्र स्वीकृत गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान अनुसार पुनविचार गर्न फिर्ता पठाएकी हुन्।
राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले १० असोज पारित गरेको थियो भने भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभामा टेबल भयो । तर, राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामै रहेको विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नआएको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए